Fotodrafitrasa – Very vola noho ny tetezana tapaka ny kaominina Ambohimangakely - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fotodrafitrasa – Very vola noho ny tetezana tapaka ny kaominina Ambohimangakely
Andro vitsy sisa dia efa hisokatra ny lalana mandalo ao Ambohimangakely amin’ny lalam-pirenena faha-2, rehefa tapaka taorian’ny rivo-doza nandalo ny 14 febroary lasa teo. Navoitran’ny Ben’ny tanàna ao Ambohimangakely, Andrianarisoa Naina ny fatiantoka noho ny tsy fisian’ny fiarabe mandalo intsony, kanefa nahazoana manodidina Ar 100 000 isan’andro izany teo aloha. ”Niteraka fihenan’ny fidiram-bola ho an’ny kaominina ny faha-tapahan’ny tetezana satria ireo kamiao mpitatitra entana isan-karazany dia mandoa Ar 1 000 isaky ny mandalo amin’io tetezana io”, hoy hatrany ny Dr Andrianarisoa Naina.
Amin’ny faran’ity volana aogositra ity no voalaza, herinandro vitsy lasa izay, fa tokony hahavitan’ny fanamboarana ny tetezana vaovao, saingy nihemotra ho amin’ny volana septambra indray izany.
Fambolena sy fiompiana – «Tokony ho sompitry ny Ranomasimbe Indianina isika», hoy ny Fivmpama(0)
Iankinan’ny ho avin’ny firenena. Notanterahina omaly ary hitohy anio, etsy amin’ ny tokotany malalaky ny Tour Zital, Ankorondrano ny «zaikabe ho an’ny fandraharahana eo amin’ ny sehatry ny fambolena sy fiompiana», karakarain’ ny Fivondronan’ny Mpan- draharaha Malagasy na ny Fivmpama. « Ny fahatsapana ny tsy fisian’ny firindrana sy ny fitrandrahana, araka ny tokony ho izy, ny harena avy amin’ny fambolena sy ny fiompiana misy eto amintsika
Fotodrafitrasa, Mpanoratra Rijakely, 30.08.2012, 09:41	FIARAHAMONINA